Banyere Anyị - Guangzhou Jinfuya ntecha Co., Ltd.
Guangzhou Jinfuya ntecha Co., Ltd, bụ ọkachamara emeputa ke China na ọtụtụ afọ ahụmahụ na ntecha nke OEM na ODM na mba ahia, Emi odude ke Li wan Plaza, Guangzhou, China. Ebe ọ bụ na 2018, anyị eguzobewo ọrụ zuru ezu nke ịchọ mma, gụnyere inye ọrụ nke OEM ODM, ịmepụta mmepe, ihe ịchọ mma ahịa na-agba izu iji nyere aka omenala dị mfe ịnweta ma rụọ ọrụ nke aka ha. Anyị na-eso uru nke àgwà mbụ, mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ dị ka anyị na isi ụlọ ọrụ ịga nke ọma.
Ngwaahịa anyị gụnyere ndo, anya, ntọala, ihe mkpuchi, ndị na-ekpuchi ahụ, mmechi, Makeup Primer, ntụ ntụ, mascaras, eyeliners, ịtọba mmiri, ọgwụ ntutu ntutu, ntutu ntutu na ihe ịchọ mma ndị ọzọ na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ.
Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke oge a na-ekpuchi mpaghara nke 20000 square mita na ụlọ ọrụ nke oge a, a na-ahazi ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị ma wuo ya n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ GMPC. Anyị nwere Klaasị akpaka akpaghị aka na-acha ọcha klas 100,000 maka ihe ịchọ mma nke dabara na ihe na-ejuputa na enwere ọgụgụ isi njikwa akara. Anyị mmepụta ogbako a kwadebere n'ụzọ na elu Central ntụ oyi usoro na dị ibuo na nnyocha akụrụngwa. Anyị nwere ọkwa na-arụ ọrụ n'ụwa niile, a na-achọpụta otu ngwaahịa ọ bụla site na sistemụ iji kwado nkwa ngwaahịa na nchekwa ya.
Usoro mmepụta 15 na ndokwa na-agbanwe agbanwe iji hụ na oge nnyefe. Anyị ọkachamara otu gụnyere graphic imewe, Logo nkwakọ, ahịa e wuru na-enye ndị ahịa na OEM na ODM ọrụ gụnyere onwe labeelu ọrụ, ahaziri logo ebi akwụkwọ ọrụ na lọjistik ọrụ. Yana ahia ahia ahia.
Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ọtụtụ ahịa dị iche iche n'ụwa gụnyere USA, South America, Canada, UK, Germany, France, Netherlands, Russia, Japan, Australia, Vietnam, Philippines, na ndị ọzọ ihe karịrị mba 50.
Anyị ji obi ụtọ na-anabata obere nnwale nnwale nke onye ọlụlụ ọhụụ ma na-atụ anya ịme mmekọrịta mmekọrịta azụmaahịa na ndị mmadụ gburugburu ụwa ma na-etolite ọnụ n'ọdịnihu dị nso.